Izibalo ezingama-25 zokumaketha kwamaselula zonyaka wezi-2014 ezibalulekile | Martech Zone
UMsombuluko, May 19, 2014 Douglas Karr
Sinomsebenzi okufanele siwenze ekwakhiweni kweselula yethu futhi senza ukulungisa njalo ngenyanga ukuthuthukisa indlela isiza sethu esiboniswa ngayo. Akulula ukunikezwa zonke izindawo zokubuka zosayizi ezihlukile kumadivayisi, kepha ukukhula kwamathrafikhi eselula kuyaqhubeka nokudlula ukukhula kwedeskithophu ukuze sazi ukuthi kungukutshalwa kwemali okuhle. Akukho lutho olukhungathekisa njengokuchofoza kusixhumanisi nokufika ekhasini ongeke ulifunde uma uku-smartphone noma ithebhulethi yakho.
Shayela u-2014 unyaka lapho ukuhamba kwebhizinisi kubamba ngempela. Izinhlangano zidinga ngempela ukuhlola amasu wokumaketha eselula ukunweba ukufinyelela kwazo. Ngalokhu ukwamukelwa okusheshayo kwe- NGESODWA, amathuba ayakhula kubathengisi nakubanikezeli bezobuchwepheshe. Ukuhlanganisa amathuluzi ahlukahlukene afana ne-computing yamafu nedatha enkulu kusiza amabhizinisi ukuthi athole okuningi kunqubo yawo entsha egxile ekuhambeni. I-WebDAM
Ukumakethwa kwamaselula e-United States kusendleleni yokukhiqiza u- $ 400 billion ngokuthengisa ngonyaka ka-2015, kukhuphuke kusuka ku- $ 139 billion ngo-2012. Uma ungakacabangi kabusha isu lakho okwamanje, usuvele ulahlekelwa umhlaba futhi udinga ukufaka amasayithi weselula, izinhlelo zokusebenza, ukuthumela imiyalezo, nokuphromotha ukuze kuthathwe okulindelwe noma ukunakwa kwamakhasimende lapho eqalisa. I-infographic yakamuva yeWebDAM inikeza izibalo ezingama-25 ezithakazelisayo mayelana nezitayela zamanje kuselula, isabelo semakethe eselula, ukukhula kokusetshenziswa kweselula nokuningi.
Tags: 2014izibalo zokuthengisa zeselulaizibalo zokumaketha zeselulaizibalo zeselulaizibalo zeselula
May 20, 2014 ku-11: 42 AM
Sawubona Douglas, ama-infographics amahle. Ngokuqinisekile kuzothonya abathengisi abaningi namasu abo, njengoba indima yezokumaketha kwamaselula ibaluleke kakhulu, futhi nazi izibalo zokukufakazela.